आलोकको सम्मानमा आर्यन र सुस्मिता एक हप्तापछी जन्मिने !
दिवंगत निर्देशक आलोक नेम्वाङको निर्देशन रहेको सिनेमा ‘अझै पनि’ आउँदो फागुन १५ बाट दर्शकमाझ आउने तयारीमा छ । आलोकको निधन पहिले नै यो सिनेमाको रिलिज मिति सार्वजनिक गरिएको थियो भने सोही मितिमा अर्को नेपाली सिनेमा ‘पुनर्जन्म’ले पनि प्रदर्शनको मिति तय गरेको थियो । अब भने आलोकको सम्मानमा भन्दै सिनेमा ‘पुनर्जन्म’ एक हप्तापछी मात्रै प्रदर्शनमा आउने भएको छ । निर्माता मोहनकृष्ण श्रेष्ठले यसको पुष्टी गरेका हुन् ।
‘हामीले यस क्षेत्रमा लागेर पाउने भनेकै सम्मान हो र त्यसका लागि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ’ त्यसैले त आलोकजीको सम्मानमा हााम्रो सिनेमाको नजुधाउने निर्णयमा पुग्यौँ’ निर्माता श्रेष्ठले भने । यस्तै निर्माता श्रेष्ठले अन्य निर्मातालाई पनि सो मितिमा सिनेमा नजुधाईदिन आग्रह गरेका छन् । पुनर्जन्म अब फागुनको तेस्रो हप्ता २२ गतेबाट दर्शकमाझ आउने छ । सत्य घटनामा आधारित भनिएको सिनेमा ‘पुर्नजन्म’मा अभिनेता आर्यन सिग्देल, शुस्मिता शाही, गजित बिष्ट, केकी अधिकारी लिड रोलमा छन । यो सिनेमा मार्फत आर्यन र गजित पहिलोपटक नेपाली सेनाको पोशाकमा दर्शकसामु प्रस्तुत हुँदैछन् । सिनेमालाई सजन श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन् ।
एम.के. इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.को व्यानरमा निर्मित यो सिनेमामा मिथिला शर्मा , विजय लामा, लक्ष्मी गिरी , रश्मी भट्ट, देशभक्त खनाल , रुश्मा श्रेष्ठ लगायतको पनि अभिनय छ । सिनेमाको वितरणको जिम्मा भने वितरक रोहित कट्टेल र रत्न श्रेष्ठले लिएका छन् ।